Dalxiis Ingiriis ah ayaa la kulmay dil la sheegay inuu ka dhacay barnaamijka shukaansiga Tinder
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Dalxiis Ingiriis ah ayaa la kulmay dil la sheegay inuu ka dhacay barnaamijka shukaansiga Tinder
Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
Maxkamadda Sare ee Auckland
David iyo Gillian Millane, waalidiinta dilka Boorsada boorsada dalxiiska ee Ingiriiska Grace Millane, ayaa yimid maanta oo Arbaco ah, Nofeembar 6, 2019, Maxkamadda Sare ee Auckland ee ku taal New Zealand halkaas oo loogu talo galay dacwadda dilka ah ee nin loo haysto dilka gabadhooda. Maxkamadaynta ayaa la filayaa inay qaadato ilaa shan toddobaad.
Dacwad oogeyaasha ayaa sheegay in Grace Millane ay kula kulantay barnaamijkeeda shukaansi Tinder gabadha lagu tuhmayo inay dishay, waxayna umuuqdeen inay naftooda ku raaxeysanayaan madaama ay booqdeen dhowr meelood kahor inta aysan dib ugu laaban aqalkiisa dhexe ee Auckland. Dacwad oogayaasha ayaa sii sheegay in ka dib markii la dilay Grace, eedaysanaha dilka gaystay uu dib ugu noqday Tinder si uu u sameeyo taariikh kale.
Millane maydkiisa waxaa laga helay shandad meel kayn ah oo ku taal Ranges Waitakere oo u dhow Auckland. Waxaa la helay toddobaad ka dib markii la waayey bishii Diseembar ee la soo dhaafay oo ku beegnayd dhalashadeeda 22aad.
Waa ayo dilaa?
Magaca eedeysanaha gacan ku dhiiglaha ah laguma shaacin amar maxkamadeed. Wuu dammaanad qaaday. Qareennadiisa difaaca ayaa sheegay in Grace ay si kama 'ah ugu dhimatay fal galmo la isku raacay oo qalad gashay. Waxay yiraahdeen ninku wuxuu xaddiday neefsashadeeda isagoo cadaadis saaray qoorteeda oo Grace ay ogolaatay.
Xeer ilaaliyaha boqortooyada Robin McCoubrey ayaa sheegay in kaamirooyinka CCTV ay soo bandhigeen muuqaalo muujinaya Grace iyo ninkan oo dhunkanaya isla markaana ku raaxeysanaya waqtigooda 1-dii bisha Disembar oo lagu qabtay burger, maqaaxi Mexico ku taal, ka dibna baarka.
Dacwad ooge McCoubrey wuxuu sheegay in eedeysanaha dilka geystay uusan u muuqan mid ka walaacsan joogitaanka meydka Grace ee gurigiisa. Wuxuu sawiro dhow ka qaaday jirkeeda wuxuuna daawaday filimada qaawan. Wuxuu sii waday inuu dhaho subaxii uu dilay Millane, wuxuu ka raadiyay Google "Waitakere Ranges" iyo "dabka ugu kulul."
McCoubrey wuxuu sheegay in ninkaasi uu markaa kireystay gaari, uu iibsaday shandad, kadibna uu meydka Grace ku dhex riday.
Kadib wuxuu farriin u diray haweeney kale si ay u xaqiijiso taariikh uu horay ugu sii qorsheeyay Tinder, isagoo kula kulmay baar. Xeer ilaaliyuhu wuxuu sheegay inuu kahadlay taariikhdiisa sida qof uu dhibaato ugaga imaan karo isdajinta kadib galmo kacsan oo qalad ah.
Dalxiiska New Zealand
New Zealand waxay ku faantaa soo dhaweynta dalxiisayaasha, iyo geerida Grace Millane waxay ku dhacday shaqo qoto dheer dalka. Raiisel wasaare Jacinda Ardern waxay kahadashay dadka reer New Zealand inay dareemayaan "waxyeello iyo ceeb" in lagu dilay dalkooda. Boqolaal qof ayaa kaqeybgalay daawashada shumaca kadib dhimashadii Millane.
Grace waxay ku safreysay New Zealand iyadoo qeyb ka aheyd safar sanadle ah oo la qorsheynayay inuu ku aado dibedda markii ay ka qalin jabisay jaamacadda.
Safarka iyo dalxiiska Hindiya ayaa wajahaya dhibaato dhaqaale oo deg deg ah